Myanmar Calendar 100years, 2004-Jun
193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 JanuaryFebruaryMarchAprilMayJunJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember 123456789101112131415161718192021222324252627282930
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၆ပြည့်နှစ် သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၅၄၈ပြည့်နှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် ၆ရက် အင်္ဂါနေ့
၁၃၀၀၁၃၀၁၁၃၀၂၁၃၀၃၁၃၀၄၁၃၀၅၁၃၀၆၁၃၀၇၁၃၀၈၁၃၀၉၁၃၁၀၁၃၁၁၁၃၁၂၁၃၁၃၁၃၁၄၁၃၁၅၁၃၁၆၁၃၁၇၁၃၁၈၁၃၁၉၁၃၂၀၁၃၂၁၁၃၂၂၁၃၂၃၁၃၂၄၁၃၂၅၁၃၂၆၁၃၂၇၁၃၂၈၁၃၂၉၁၃၃၀၁၃၃၁၁၃၃၂၁၃၃၃၁၃၃၄၁၃၃၅၁၃၃၆၁၃၃၇၁၃၃၈၁၃၃၉၁၃၄၀၁၃၄၁၁၃၄၂၁၃၄၃၁၃၄၄၁၃၄၅၁၃၄၆၁၃၄၇၁၃၄၈၁၃၄၉၁၃၅၀၁၃၅၁၁၃၅၂၁၃၅၃၁၃၅၄၁၃၅၅၁၃၅၆၁၃၅၇၁၃၅၈၁၃၅၉၁၃၆၀၁၃၆၁၁၃၆၂၁၃၆၃၁၃၆၄၁၃၆၅၁၃၆၆၁၃၆၇၁၃၆၈၁၃၆၉၁၃၇၀၁၃၇၁၁၃၇၂၁၃၇၃၁၃၇၄၁၃၇၅၁၃၇၆၁၃၇၇၁၃၇၈၁၃၇၉၁၃၈၀၁၃၈၁ တခူးကဆုန်နယုန်ပထမဝါဆိုဒုတိယဝါဆိုဝါခေါင်တော်သလင်းသတင်းကျွတ်တန်ဆောင်မုန်းနတ်တော်ပြာသိုတပို့တွဲတပေါင်း ၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၁၁၂၁၃၁၄၁၅၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၁၁၂၁၃၁၄
Mahasamaya Day. During the time of Buddha, many achieved arahantship or enlightenment after Buddha preach the Mahasamaya Sutra in Maha Vana Forest. Traditionally Buddhist monks recite the Mahasamaya Sutra on this day for the benefit of people.
Myanmar Calendar 2004 June , ၁၃၆၆ နယုန်-ပထမဝါဆို